India Ramchung Ah Medical College Exam A Har Bik An Tinak Siangin Ah Hmunthur Char Bute In A Cawmmi Pa Cu Addmission A Hmuh Ve. – Onlinenungak
India Ramchung Ah Medical College Exam A Har Bik An Tinak Siangin Ah Hmunthur Char Bute In A Cawmmi Pa Cu Addmission A Hmuh Ve.
By chin tawi on December 27, 2020
AIIMS (All India Institutes of Medical Sciences) ဆေးကျောင်းဝင်ခွင့် စာမေးပွဲဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အခက်ဆုံးစာမေးပွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားပေါင်း သိန်းနဲ့ချီပြီး ဝင်ဖြေကြတဲ့ အထဲမှာ စာမေးပွဲအောင်သူဦးရေဟာ (၁)ရာခိုင်နှုန်းတောင် မပြည့်ပါဘူး။
ဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့ စာမေးပွဲမှာ အက်ရှာရမ် ရှို့ဟာရီဟာ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် အက်ရှာရမ်ဟာ AIIMS ကို ဂျိုပူးမြို့ဆေးတက္ကသိုလ်မှာ တက်ရောက်ခွင့် ရနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
စာအရမ်းကြိုးစားလို့ ဆေးကျောင်းဝင်ခွင့်ရတာဟာ မထူးဆန်းပေမယ့် အက်ရှာရမ်မှာ နောက်ထပ် ထူးခြားချက်တစ်ခု ရှိနေပါသေးတယ်။
အက်ရှာရမ်ဟာ မက်ဒ်ယာပရာဒက်ရှ်ခရိုင် ဒီဝါမြို့က တဲပုတ်တစ်ခုမှာနေထိုင်တဲ့ အမှိုက်ကောက်သမားတစ်ဦးရဲ့ သားဖြစ်ပါတယ်။ နေရတဲ့အိမ်က တဲပုတ်သာသာဖြစ်လို့ လျှပ်စစ်မီးတောင် လုံလုံလောက်လောက်မသုံးရတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ အက်ရှာရမ်ဟာ ကြီးပြင်းခဲ့တာပါ။
The Logical Indian ကို အက်ရှာရမ်က အခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက အဖေက ရူပီး ၂၀၊၃၀ လောက်ပဲရှာနိုင်တာ။ ရွာမှာက ဒေါက်တာရမ်းကုတစ်ယောက်ရှိတယ်။
ရွာသားတွေက တစ်ခုခုဆို သူ့ဆီပဲ သွားကြတာဆိုတော့ လက်ဖျားငွေသီးတာပေါ့။ အဆင်ပြေလိုက်တာဆိုတာ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကြည့်ပြီးတော့ ဆရာဝန်လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးရသွားတာပဲ။ ကျွန်တော်က ဘဝကို အဆင်ပြေပြေ နေချင်တာဗျ။”
အက်ရှာရမ်ဟာ (၁၀)တန်းစာမေးပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာ ဒက်ခ်နရှာနာဖောင်ဒေးရှင်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒက်ခ်ရှနာဖောင်ဒေးရှင်းဟာ NGO အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို ပညာရေးကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အက်ရှာရမ်ဟာ ပုံမှန်ကျောင်းတက်နေရတဲ့အပြင် ဒက်ခ်ရှနာရဲ့ အတန်းတွေကိုလည်း တက်ခဲ့ရပါတယ်။
အက်ရှာရမ်က “အောင်မြင်မှုရဖို့ဆိုတာ လွယ်လွယ်ကူကူတော့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ။ ကျွန်တော် တစ်နေ့လုံး စာဖတ်ရတယ်။ တစ်နေ့ကို (၂)နာရီ (၃)နာရီလောက်ပဲ အိပ်ရတာ။ စာမေးပွဲမတိုင်ခင်တော့ တစ်လလောက်ကြိုပြီး စာတွေအကုန်ပြန်နွှေးရတယ်။ လူတိုင်းလည်း အဲ့ဒီအချိန်မှာ အိပ်ပြန်ပြီး စာကျက်ကြရတာပဲ။
ကျွန်တော်ကတော့ အိမ်မှာ လျှပ်စစ်မီးမရလို့ ရေနံဆီမီးအိမ်ထွန်း ဒါမှမဟုတ်လည်း သူငယ်ချင်းအိမ်သွားပြီး စာဖတ်ရတယ်။” လို့သူကြိုးစားခဲ့ရပုံကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
အခုအခါမှာတော့ အက်ရှာရမ်ရဲ့ ကြိုးစားခဲ့ရသမျှတွေဟာ အရာထင်လာခဲ့ပါပြီ။ ဆေးကျောင်းဝင်ခွင့် အောင်တဲ့နေ့မှာတော့ အက်ရှာရမ်ရဲ့ ဖခင်ကြီးဟာ ဝမ်းသာလွန်းလို့ တစ်ညလုံး မအိပ်နိုင်ရှာဘူးလို့ သိရပါတယ်။
မိဘတွေက ဆင်းရဲချို့တဲ့ပေမယ့် ပညာလိုလားပြီး ကိုယ်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ ဆေးတက္ကသိုလ်ကို တက်နိုင်ဖို့ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အက်ရှာရမ်ကတော့ လူငယ်တွေ အတုယူထိုက်တဲ့ စံပြလူငယ်လေးတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Crd: Media 9
Sagaing ram then thentse((တန့်ဆည်မြို့) ah April 8 tuni zing tiang ah mipi chung in minung 11 cu ralkap nih an kah thah than hoi hna
Saikalung thlichia ruangah April 8 ahanunnakaliammi 180 hrawng an si tiah theihasi.
Tuipuiral YMA: Hnangam Tein Um Ulaw Angei Tu Lungput He Khua Kan Sa Tti Hna Lai
Thil Sining Cu Vawlei Cung i A Ngan Bakmi Media CNN In Ms Clarissa Ward Nih A Phuan Thluahmah Cang